Nagarik News - सबै लेखक जोगी हुन् : ईश्वर कँडेल, आख्यानकार
चितवन बसेर लेखनकर्म गरिरहेका कवि/आख्यानकार ईश्वर कँडेलको जीवनशैली फकिरको जस्तो छ। उनी मनमौजी पाराले घुमिहिँड्छन्। घुम्नकै लागि भर्खरै यिनले अध्यापन पेशा पनि छोडेका छन्। अंग्रेजी भाषामा लेख्ने कँडेलको भर्खरै 'इकोज' उपन्यास प्रकाशनमा आएको छ। यसअघि उनको कवितासंग्रह 'बाया' प्रकाशित छ। शुक्रवारका लागि कँडेलसँग दीपक सापकोटाले गरेको कुराकानी-
अंग्रेजीमा उपन्यास लेख्नुभो। पाठक रेस्पोन्स कस्ता छन् ?
अंग्रेजीमा लेखेर पनि मेरो उपन्यासको सोचेभन्दा राम्रोे रेस्पोन्स आएको छ। उपन्यासमा दर्शन पक्ष सबल भएको पाठकबाट सुनेको छु। उपन्यास पढेपछि एकजना पाठकले बाटोमा चिनेर मलाई अँगालो हालेका थिए।
नेपालमा बसेर अंग्रेजीमा लेख्नुका आफ्नै दुःख होलान्। खासगरी तपाईंका पाठक को हुन् ?
अंग्रेजीमा लेख्नुका आफ्ना दुःख पक्का छन्। नेपाली विÈयवस्तु र परिवेशलाई अंग्रेजीमा प्रस्तुत गर्दा कतिपय कुरा दुरुस्त अंग्रेजीजस्ता पनि हुँदैनन् र वाक्य संरचना पनि हाम्रै नेपाली–अंग्रेजीजस्ता पनि हुन जान्छन्। अझै प्रमुख कुरा त अंग्रेजीका पाठक पनि कम हुन्छन्।
नेपालमा अंग्रेजी पढ्नेहरूलाई पाउलो कोहेलो, मार्खेजहरू खोज्दै ठिक्क छ। तपाईंको किताब पसलको दराजमै थन्कियो भने ?
नयाँ कुरा र विषयवस्तुलाई पाठकले खोजी–खोजी पढ्छन्। खासगरी कुनै लेखकले आफूले पाठक पाउँछु भनेर लेख्दैन। मेरो काम उपन्यास लेख्ने हो। पाठकले पढ्लान् भन्ने आशा गर्छु।
अंग्रेजीमा लेखिरहेका नेपालीहरूको 'थिम', 'कन्टेन्ट' चाहिँ नेपालकै परिवेश हुन्छ, है ? भाषा चाहिँ किन अंग्रेजी ? 'ओभरस्मार्ट' बन्ने लोभ हो ?
अंग्रेजीमा लेखे पनि म नेपाली लेखक हुँ। मेरा 'थिम' र 'कन्टेन्ट' पनि नेपाली नै हुन्। नेपाली भाषाका पाठक थोरै छन् भने अंग्रेजी भाषा बोल्ने र पढ्नेको संख्या धेरै छ। अब नेपाली थिम र कन्टेन्ट नेपालभित्र मात्रै सीमित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कुनै पनि देशमा आफ्नो राष्ट्र, संस्कृति, शब्द र पहिचान व्यापक पार्न लेखकको ठूलो भूमिका हुन्छ। अब हाम्रा पुस्तक संसारभर पढिनुपर्छ। यसको एउटै उपाय कि त अंग्रेजीमा लेखिनु या नेपालीमा लेखिएका किताबलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरिनु नै हो। आजकल अंग्रेजी बोल्दा या लेख्दा ओभरस्मार्ट भइन्छ जस्तो म ठान्दिनँ।
काठमाडौँबाहिर बस्नु, त्यसमाथि अंग्रेजीमा लेख्नु आफैँमा एउटा भयंकर चुनौती होइन ? तपाईंले यो जोखिम किन मोल्नुभो ?
पहिलो कुरा त जोखिम मोल्नु मेरो सोख हो। जोखिमभित्र व्यक्तिले जहिले पनि आफूलाई पाउँछ। दोस्रो कुरा, मेरो जागिर, जीवन र व्यापारसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा मलाई ढुक्क हुन मन पर्दैन। मैले मेरो मानसिक पीडा कम गर्न लेख्न थालेको हुँ, जुन मैले दुई दशक ढिलो गरेँ। जहाँसम्म काठमाडौँबाहिर बसेर लेख्ने कुरा छ, लेख्ने विषयवस्तु नै काठमाडौँबाहिर छन्। भाषा त माध्यममात्र हो।
तपाईं ओशो सन्न्यासी पनि हो। सन्न्यास, जीवन, लेखन, अध्यापनजस्ता क्षेत्रमा कसरी सन्तुलन मिलाइरहनुभएको छ ?
ओशोको सन्न्यास नवसन्न्यास हो। ओशो सन्न्यासीहरू कर्ममा विश्वास गर्छन्। म कर्म सन्न्यासी हुँ। हरेक कर्मसँगै ध्यान पनि गरिरहेको हुन्छु।
जोगी बन्न छोडेर लेखक बन्नु'भो नि ?
सबै लेखक जोगी हुन्। तर, सबै जोगी लेखक होइनन्। लेखक एक जिम्मेवार जोगी हो। लेखक अरूभन्दा फरक धारका हुन्छन्। उनीहरूको आफ्नै समय हुन्छ, जुन सामान्य घडीसँग मेल खाँदैन। म पनि यस्तै एक जोगी हुँ।
तपाईंको जीवन बाँच्ने तरिका देख्दा संसारप्रति कुनै मोह नभएजस्तो लाग्छ। तर, यस दुनियाँप्रतिको लोभ त बाँकी नै छ है। जस्तो कि, आफू छापिइने, पढिइने मोहमा तपाईं किताब लेखिरहनुभएको छ।
आफूले लेखेका पुस्तक बजारमा, लाइब्रेरीमा वा कुनै पाठकको हातमा देख्दा एउटा लेखक पक्कै खुशी हुन्छ। तर, कुनै मोह बोकेर किताब लेख्ने लेखक म होइन। त्यस्तो लेखनको आयु पनि हुँदैन। म केयरलेस लेखक हुँ। तर, नेपालमा पनि अंग्रेजीमा लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसलाई नै मेरो मोह ठान्नुहुन्छ भने म के भनौँ ?
लेखकहरूको वृत्तमा तपाईं रक्सी पिएर नमात्ने श्रेणीमा पर्नु हुँदोरहेछ। रक्सीलाई कसरी जित्नुभो ?
रक्सीलाई मैले जितेको छैन। कहिलेकाहीँ म पनि व्यापक रक्सी पिउँछु र मात्छु पनि। मलाई रक्सीसँग हार र जीतको युद्ध लड्नु छैन।
तपाईं ठमेलका गल्लीहरूमा अबेर रातिसम्म घुम्नुहुन्छ। किन हो ?
मलाई अबेर रातिसम्म ठमेलका गल्ली घुमिहिँड्न मनपर्छ। त्यहाँको रात्रि–जीवन अनौठो लाग्छ। ठमेल मादक–पदार्थ खाएर लेखनको कच्चा–पदार्थ खोजिहिँड्ने ठाउँ पनि हो। सडक बालबालिका, यौनकर्मी, तेस्रोलिंगी र ड्रगिस्टहरूसँग म लामो समय कुरा गरिबस्छु। ठमेल घुम्नुको मेरो उद्देश्य लेखनको विषय खोज्नु हो।
'इकोज' लेख्दाको कुनै विशेष अनुभव छ कि ?
'इकोज' लेख्दै गर्दा मैले जोगी र समलिंगीलाई साथी बनाएँ। तिनीहरूसँग रात–साँझ घुमिहिँडेको छु।
नेपाली पाठकले तपाईंलाई किन पढ्ने ?
त्यो त मलाई थाहा छैन।